पूर्ण आकारको बजेट आउनु सकारात्मक – Chitwan Post
पूर्ण आकारको बजेट आउनु सकारात्मक
प्रकाशित मिति: सोमवार, असार ३१, २०७०
[author image=”https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/31927_553125014708834_110517876_n.jpg” ]विधुर ढकाल[/author]
भरतपुर । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनको लागि गठन भएको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकारले आइतबार पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको गठबन्धन सरकारहरुले सहमति हुन नसक्दा पूर्ण आकारको बजेट दिन सकेका थिएनन् । देस पुरक बजेटको भरमा चलिरहेको थियो ।
अघिल्ला सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु अगाडि बढ्न सकिरहेका थिएनन् । प्रशासनिक खर्चमा मात्र बजेट सीमित भएको थियो । विकास कार्य अवरूद्ध थियो ।
वर्तमान चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेर अवरूद्ध विकास प्रक्रियालाई गति दिने काम थालेको छ । सरकारले जे जस्ता कार्यक्रम लिए पनि पूर्ण आकारको बजेट आउनु नै ठूलो कुरा मान्दै चारैतिरबाट यसलाई सकारात्मक ढंगले लिइएको छ । चितवनका स्थानीयहरुले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले यसलाई राम्रो मानेका छन् । विकासले गति ल्याउने आशा पनि राखेका छन् ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो संस्था उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले सार्वजनिक गरिएको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कृषि, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको संघका अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराईले टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
‘अघिल्ला सरकारहरुले आयातलाई राजस्व वृद्धि गर्ने माध्यमको रुपमा लिँदा उत्पादनमूलक उद्योगहरु धरासायी भएका थिए’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कमसेकम अहिलेको सरकारले उत्पादनलाई बढावा दिँदै आयातलाई घटाउने योजना ल्याएको यो अर्काे राम्रो पक्ष हो ।’ ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कृषि क्षेत्रमा बजेट दोब्बर पारिनु पनि सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ ।
विकास बजेटलाई साधारण खर्चभन्दा कम छुट्याउनु बजेटको कमजोर पक्ष रहेको अध्यक्ष डा. भट्टराईको भनाइ छ । ‘कमसेकम विकास बजेटलाई साधाराण खर्चभन्दा बढी छुट्टाउनु पथ्र्यो’, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले कुन क्षेत्रमा के गर्ने स्पष्ट रूपमा बजेटमा समावेश गर्न सकेको भए थप प्रभावकारी हुने थियो भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो । तथापि राजनीतिक निर्णय सीमित अधिकार क्षेत्रमा खुम्चिएको सरकारले ल्याएको बजेट हेरेर सरकारलाई दोष दिने ठाउँ नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रको बजेटलाई दोव्बर पारी बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानहरुलाई राहत दिन राहत कोष खोल्ने निर्णय बजेटले गरेको भन्दै पोल्ट्री व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । पोल्ट्रीलाई नै लक्षित गरेर कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएकोप्रति उनीहरुको दुखेसो छ ।
समग्रमा हेर्दा सर्वसाधारणसमेत बजेटप्रति आशावादी देखिन्छन् भरपुर–४ का श्रीकृष्ण तिमल्सिना बजेटले सीमिततामा समग्रता खोजेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । ‘अहिलेको सरकारले यो आकारको बजेट ल्याउनु नै ठूलो कुरो हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेजस्तो देखिन्छ, हेरौँ कति सफल हुन्छ ।’
‘बजेटमार्फत युवाहरुलाई स्वरोजगार सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएर दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने प्रयास गरिएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । हरेक सरकारले बजेटमा राम्रा कुरा ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको भन्दै उहाँले यसलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।
कमजोर सहकारीलाई आर्थिक अनुदान
निर्वाचन गर्न सकार दृढ– अध्यक्ष रेग्मी
सोनम गियर्सद्वारा गंगालाल अस्पताललाई पिपिई सेट सहयोग